Rita, Writing for My Sake!: အဖြူရောင်များ ... သို့မဟုတ် အချစ်အကြောင်း အက်ဆေး (အဆုံး)
အဖြူရောင်များ ... သို့မဟုတ် အချစ်အကြောင်း အက်ဆေး (အဆုံး)
"ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ" ဝတ္ထုတို၌ အချစ်၏ အတတ်ပညာကို သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် နိမိတ်ပုံပြုကာ အလွန်ကောင်းမွန်သော presentation ကို ပြသခဲ့သည်။ "ချစ်ခြင်း" ကို သင်္ကေတပြုဖို့ရာ သစ်ပင်ထက် ဆီလျော်သင့်မြတ်သော နိမိတ်ပုံ မရှိနိုင် ဟုထင်ပါသည်။
သက်ရှိပင် ဖြစ်စေ ၊ သက်မဲ့ပင် ဖြစ်စေ...မိမိ ချစ်ခင်မြတ်နိုးသော အရာကလေးတစ်ခုကို တိုးတက်မြင့်မားလာအောင် .. သူ့ရဲ့ လိုအပ်ချက် မှန်သမျှကို လိုလေသေးမရှိ ဖြည့်စွမ်းပေးရန် တတ်သိနားလည် ပြီး မြေတောင်မြောက်ပေးနိုင်ခြင်းမှာ အချစ်၏ အတတ်ပညာပင် ဖြစ်သည်။ ၄င်းအချက်သည်ပင် "ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ" ၏ Theme ဖြစ်၏။
စိတ်ခံစားမှု သက်သက်သာ ရှိမည် ဆိုလျှင် ထို ချစ်ခြင်း၌ တာဝန်ယူလိုစိတ် ကင်းလိမ့်မည်။
အချစ်သည် တာဝန် (အချစ်=တာဝန်) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ပါ။
အချစ်စိတ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
အကျဉ်းအားဖြင့် ဆိုရသော်.. (မည်သူနှင့် မည်သူ့ကြားတွင်မဆို ရှိသော) အချစ်သည် တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ဖြည့်ဆည်း မြှင့်တင် ပေးလိုသည့် ဆန္ဒကလေးသာ ဖြစ်ပါသည်။
ချစ်သူ၏ ဘဝတွင် ကိုယ်မှ မရှိမဖြစ်ပါဘူးဟု ကိုယ့်ဘက်က ယုံမှတ်လာသော အချိန်တွင် ရယူပိုင်ဆိုင်လိုသော ဆန္ဒ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ဤသည်မှာ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး မှန်သမျှ ကိုယ်ကသာ ဖန်တီးပေးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်၏။
အချစ်သည် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ရှည်လျားမည့် ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။
(လောကမှာ သေချာမှသာ ပြောကြစတမ်း ဆိုလျှင်တော့ လူ့စကားသံတွေ ဆိတ်သုဉ်းကုန်လိမ့်မည်။
အချစ်ဆိုတာကို မသိပါ။ သို့သော်...
သူ့ကို ကိုယ်ချစ်နေတယ်လို့ (သူအပါအ၀င်) တလောကလုံးကို အသိအမှတ်ပြုခိုင်း ထားချင်တယ်။
အင်မတန် တင်းကြပ်တဲ့ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ...ချိုးဖျက်ဖို့ ခဲယဉ်းပြီး ကြီးလေးတဲ့ အပြစ်ဒဏ် ကျခံရစေနိုင်တဲ့ စာချုပ်တစ်ခုပေါ်မှာ သူ့ကို ကိုယ် ချစ်နေကြောင်း ခံဝန်ချက်ထားချင်တယ်။
2ooo ခုနှစ် အလယ် လောက်မှာ ရေးဖြစ်တယ်... စာဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာတော့ နည်းနည်း hot ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့..ဒီစာလေးကို မြန်မာပြည်ကနေ တကူးတက သယ်လာခဲ့မိတာ..Identity ပြသလိုဖြစ်နေတဲ့ စာပိုဒ်တချို့ကိုပဲ ဖြုတ်ပြီး အရင်းအတိုင်းနီးပါးပဲ တင်ထားပါတယ်..
၁ဝ စုနှစ် တစ်ခုစာ နီးပါး ကြာခဲ့ပြီလေ။
ပြန်တင်တဲ့ အချိန်မှာ ပြင်တော့ ပြင်ချင်တယ် .. ဒါပေမယ့် idea တွေ လုံးဝကို ခန်းခြောက်နေပြီ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..ငယ်ငယ်က အရေးအသားတွေဟာ နေရာတော်တော်များများ အူကြောင်ကြောင် နိုင်ပေမယ့် အတွေးနောက်ကို အရေးက လိုက်နိုင်ခဲ့သေးတယ်..ခုတော့ တွေးမိတာတစ်ခုကို ဘယ်လို presentation နဲ့ ပြရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရင် အကြိမ်ကြိမ် ကြိတ်စက်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ကြံဖတ်တွေသာ ပြေးမြင်မိတော့တယ်။
(အော် .. အသက် ၂ဝ လောက်တုန်းကတော့ အချစ်ကို အဲဒီလို ............... ခဲ့ဖူးတယ်)
PS - ဂျူး ရဲ့ ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ ကိုတော့ ခုချိန်ထိ ယုံကြည်စွဲလမ်း နေတုန်းပဲ။
အတိအကျပြောရရင် ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ ကနေ ကိုယ်ရလိုက်တဲ့ message ကို...
အဲဒီ အကြောင်းကို ဒီ post မှာ နည်းနည်း ထည့်ရေးထားမိတယ်။
ဒီ နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့ ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု အတော်များများနဲ့ ရေးဖြစ်ထားတာပါ။
(20th Dec 2009)
Posted by Rita at 12/20/2009 07:35:00 PM
All are (part I to V) great.
လက်မထောင်ချင်ခဲ့တဲ့ အရေးအသားတွေပေါ့လေ... ခုနေပြန်ဖတ်တော့ ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး.. ရီလဲ ရီချင်တယ်..
Remember! You are only over 30 years old.
I think you can't write above compose (Part I to V) in present time.
ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ခုဖတ်လည်းကောင်းနေတာပါပဲ လူကြီးလာလို့ စိတ်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ..